प्रसाईं साधारण तारेखमा रिहा
मुख्य पृष्ठसमाचारप्रसाईं साधारण तारेखमा रिहा
भक्तपुर, १ फागुन । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको अभियोग लागेका झापाको बीएण्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा पुगेर हाजिर भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहीबार हाजिर भएका प्रसाईंलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बयान सकेर साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएकी छिन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेको आदेश अनुसार उनी छुटेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
गत माघ २ गते अभद्र व्यवहार कसुरमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको प्रशासनले हाजिर भएलगत्तै तारिखमा छाडेको छ ।
अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि साधारण तारिखमा छाडिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताइन् । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर प्रमुख सविन प्रधानले प्रहरीले गत आइतबार जिल्ला सरकारी वकिललाई प्रसाईंविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको बताए ।
त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला प्रशासनमा प्रसाईंविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
एक महिनादेखि खोजीको सूचीमा राखेको प्रसाईंलाई एक महिनासम्म खोज्दा पनि भेट्न नसकेकामा बिहीबार आफैँ सुटुक्क प्रशासनमा हाजिर भएको प्रहरीको भनाइ छ । २० करोड रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाएपछि प्रसाईंविरुद्ध आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीले मानहानीको मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
यता आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीले प्रसाईं प्रशासनमा हाजिर भएको र साधारण तारिखमा छुटेकोबारे प्रशासनले जानकारी नगराएको बताए । उनले आफ्नो तर्फबाट प्रसाईंविरुद्ध कानूनी र प्रशासनिक लडाइँ जारी रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
मानहानीको मुद्दाका बारेमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पनि प्रसाईंलाई २१ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । अदालतका श्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठका अनुसार २१ दिनभित्र आफ्नो कुरा भए लिखित रुपमा अदालत समक्ष राख्न आदेश दिइएको हो ।
जिल्ला प्रशासनले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको एक महिनासम्म पनि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन ।
प्रसाईंले पनि आयोगका उपाध्यक्ष गिरीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी दिएका छन् ।
गिरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्ष र स्वास्थ्य सेवा बीमा बोर्डको निर्देशक हुँदादेखिको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरिनुपर्ने प्रसाईंको माग छ ।